१४ महिना तलब नपाउँदा पनि वैदेशिक रोजगारका कर्मचारी उत्साही - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
८ चैत्र २०७४, बिहीबार ०८:२३ March 22, 2018 Nonstop Reporter
काठमाडौ, ८ चैत ।
तलब नपाएको १४ महिना भयो । तैपनि उत्साहसाथ कार्यालयमा काम गरिरहेका छन् । नियमित तलब पाइने ठाउँमा सरुवाको अवसर मिल्दा पनि जाँदैनन् । यति कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी कहाँका होलान् ?
यी कर्मचारी नेपालकै निजामती सेवाका हुन् । वैदेशिक रोजगार विभागको ताहाचलस्थित कार्यालयमा यस्ता करिब डेढ दर्जन कर्मचारी छन् । दरबन्दीभन्दा बढी भएका १६ कर्मचारीलाई ६ देखि १४ महिनासम्मको तलब दिइएको छैन । तरपनि, कर्मचारी गुनासो नगरी खुरुखुरु काम गरिरहेका छन् ।
यति लामो समयसम्म तलब नपाउँदा पनि कर्मचारी किन काम गरिरहेका छन् त ? निमित्त कार्यालय प्रमुख प्रेमबहादुर देसार भन्छन्, ‘यो त बाध्यता हो ।’ आजको नयाँ पत्रिकामा यो समाचार छापिएको छ ।
महानिर्देशक भन्छन्– मलाई थाहा छैन
मातहतका कार्यालयमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी रहेको र उनीहरूले तलब खान नपाएकोबारे वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भुवन आचार्यले भने अनभिज्ञता जनाए । आफू एक महिनादेखि मात्र जिम्मेवारीमा रहेकाले त्यसबारे जानकारी नभएको उनले बताए । ‘दरबन्दीभन्दा बढी किन बसिरहेका छन्, मैले बुझ्नुपर्छ र भोलि तपाईंसँग भन्न सक्छु,’ महानिर्देशक आचार्यले भने ।
एयरपोर्ट डेक्समा पनि उस्तै
वैदेशिक रोजगार विभागको एयरपोर्ट डेक्समा पनि दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी छन् । उक्त डेक्समा १० जनाको दरबन्दी रहेकोमा तीन कर्मचारी बढी रहेको डेक्स प्रमुख रत्नमान मानन्धरले बताए ।